Ny takelaka interactive Qomo dia mahasoa anao indrindra.
Navoaka hatramin'ny taona 2020 ny takelaka interactive Qomo Bundleboard ary manana traikefa amin'ny fampiasana tsara ho an'ny mpanjifa. Miorina amin'ny Android 8.0, afaka misintona rindranasa marobe ao amin'ny rafitra ianao. Ny tombony amin'ny fananana fampirantiana interactive tsy miankina dia ny tsy fisian'ny fetra amin'ny tranokala sy ...
QPC80H2 doc cam upgrade version efa nivoaka
Mino izahay fa mpanjifa maro no efa nampiasa fakan-tsarimihetsika Qomo QPC80H2 manana traikefa tsara amin'ny fampiasana. Tamin'ny Novambra 2021, dia nanao fanavaozana ihany koa izahay ho an'ny modely QPC80H2. Amin'ny lafiny iray, efa nanatsara ny zoom optika izahay ho zoom optika 10 x fa tsy zoom optika 6x indray mandeha. Ankoatr'izay, izahay koa dia manangana ...
Iza amin'ireo trano heva no mety kokoa ho an'ny mpampianatra hanehoana sy handraketana ny taranja?
Ao amin'ny fampianarana any an-dakilasy, mpampianatra maro no manome lanja lehibe ny fandinihan-tena, ny traikefa, ny fifandraisana ary ny fanadihadiana ataon'ny mpianatra. Tsy isalasalana fa izany dia mampiseho ny anjara asa lehibe amin'ny fampisehoana amin'ny fampianarana an-dakilasy. Ankehitriny, andeha isika hanoro trano heva fampianarana fampisehoana mahery vaika ho an'ny rehetra. Aleo tsy...
Efa azonao ve ny soa azo avy amin’ny fampianarana fahendrena?
Nalaza tato ho ato ny fampianarana fahendrena. Fanampin’ny fampianarana nentin-drazana izy io tany am-boalohany, saingy lasa goavana izy izao. Efitrano fianarana maro izao no mampiditra bokotra feo ao an-dakilasy marani-tsaina, takelaka interactive marani-tsaina, tranoheva horonan-tsary tsy misy tariby ary fitaovana ara-teknolojia hafa hanampiana ny...
Misy karazana teknolojia fikasihana misy ankehitriny, ka samy miasa amin'ny fomba samihafa ny tsirairay, toy ny fampiasana hazavana infrarouge, tsindry na onjam-peo mihitsy aza. Na izany aza, misy teknolojia ecran roa izay mihoatra ny hafa rehetra - fikasihana resistive sy fikasihana capacitive. Misy tombony t...
Ny webcam tsara indrindra ao Qomo
Ny webcam tsara indrindra eny an-tsena dia mety miovaova be amin'ny vidiny, ny endri-javatra ary ny fanatsarana, ka tsy mahagaga raha mahasahirana ny fisafidianana ny tsara. Raha manana tanjona manokana ao an-tsainao ianao, toy ny fandefasana mivantana amin'ny Twitch na YouTube, fiantsoana lavitra any amin'ny birao na hisambotra fotsiny ...
Fanabeazana Qomo, fakan-tsary tsy misy finday QPC28
Ny fakan-tsarimihetsika tsy misy tariby QPC28 no fakan-tsarimihetsika faran'izay manavao sy mirindra indrindra noforonin'i Qomo mba hanomezana hery ny mpanabe sy ny mpianatra hizara, hahita ary hianatra! Namboarina ho an'ny efitrano fianarana maoderina izy io, misy ny famoahana 8MP ho an'ny sary, ny halaviran'ny tifitra midadasika, ny mekanika ...
Manatsara ny fianarana sy ny fandraisan'anjara ny rafitra famaliana an-dakilasy
Ny vahaolana famaliana ao an-dakilasy dia natao hanomezana ny mpampianatra ny angona fanombanana amin'ny fotoana tena ilainy hanara-maso sy hanitsiana ny fampianarana mba hahazoana tombony ambony indrindra amin'ny mpianatra. Mametraha fanontaniana mifampiresaka amin'ny alalan'ny PowerPoint ary asaivo mamaly amin'ny alalan'ny clickers an-dakilasy ny mpianatrao. ☑ Miara-miasa amin'ny fandaharam-pianaranao ankehitriny...
Qomo QD3900H1 Desktop document camera dia nampiato ny famokarana
Ry mpanjifa Qomo rehetra, eto izahay mampahafantatra anareo fa efa nitsahatra ny famokarana fakantsary antontan-taratasy QD3900H1 Desktop ny Qomo. Ary ity vokatra ity dia nalain'ny QD3900H2 desktop document visualizer izay ny fijery dia hitovy tanteraka amin'ny QD3900H1 document camera. Saingy misy ihany koa ny avo ...
Inona ny webcam USB ho anao miasa any an-trano
Ny webcam tsara indrindra no vahaolana tonga lafatra ho an'izay marary kely mijery ny tarehiny isan'andro. Ny antso an-tsary dia tsy fomba mahafinaritra indrindra hifaneraserana amin'ny olombelona hafa, saingy azo inoana fa efa nanao be dia be tamin'izy ireo ianao tamin'ny taon-dasa na mihoatra! Na ianao...
Rafitra valin'ny mpianatra (SRS)
Ny System Response Student (SRS) dia ahafahan'ny mpampianatra mametraka fanontaniana sy manangona ny valintenin'ny mpianatra mandritra ny lahateny. Ny rafi-pamalian'ny mpianatra dia matetika antsoina koa hoe clickers, rafitra famaliana an-dakilasy, rafitra famaliana manokana, na rafitra valin'ny mpihaino. Ao amin'ny Qomo, ny lesoka...
Fetiben'ny Sinoa Double Ninth
Ny Fetiben'ny Fahasivy Double, antsoina koa hoe Festival Chongyang, dia atao amin'ny andro fahasivy amin'ny volana fahasivy. Antsoina koa hoe fetin’ny zokiolona izy io. Amin’ny taona 2021, atao ny 14 oktobra 2021 ny fetiben’ny fahasivy indroa. Araka ny firaketana an-tsoratra ao amin’ny boky mistery Yi Jing, ny isa...